Senegaly: Fikorontanana an-tsekoly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Desambra 2008 7:50 GMT
Ao amin'ny lahatsoratra navoakan'ny vohikala vaovao PressAfrik [fr], no anoratan'i Awa Diédhiou fa “Tandindonin-doza ny sekoly Senegaly”, satria maro amin'ny sekoly – indrindra ny ao Dakar – no manakaiky loatra ny sekoly,
Sarin'ny miara-mianatra aoamin'ny sekolin'i Agnam-Goly, Senegal avy amin'i Adama Diop, alalan'i Wikipedia Commons License.
Naomed, nanoratra [30th of November 2008] ao amin'ny bolongana Politique au Sénégal [fr], no mamoaka tranga hafa :
Nohamarinin'i Hamidou Sagna izany toe-javatra izany raha namoaka lahatsoratra ao amin'ny allAfrica.com [fr] izy mikasika ny fihetsiketsehan'ny ONG sy ny mpianatra any Hann-Bel Air, distrikan’ i Dakar, miantso ny fampitsaharana ny herisetra, fihoara-pahefana, fanimbana fitaovam-pananahana ary fanaovana an-keriny ny ankizivavy. Manao T-shirt misy izao soratra manaraka izao ny ankizy “Te-hianatra tsy misy tahotra aho”, “Ny sekoliko, toerana atokisana hianarana” ary “Atsaharo ny fanorisorenana ankizivavy”.
Lahatsoratra iray ao amin'ny Scoops de Ziguinchor [fr] no itaterana ny kabarin'ny Ben'ny tanànan'i Ziguinchor, teo ampanolorana fanaka sy kojakojam-pianarana ho an'ny sekoly. Faly izy ary niteny amin'ny ray aman-dreny hoe: “Nihafy tokoa ianareo ho amin'ny ho avin'ny zanakareo. Safidy tsara izany”. Fa ny tena nahavariana, dia notsikerainy avy eo ny fanabeazana:
Soa ihany fa mihamaro ny ankizy no mamonjy sekoly ny any Senegaly. Ny antontan'isan'i UNESCO no namoaka fa mianatra any amin'ny ambaratonga voalohany